Shiinaha Photoluminescent Vinyl Tape / Warshadaha filimada iyo soosaarayaasha | Grand Luminous
Photoluminescent Vinyl Tape / Filimaanta Tafaasiisha filimka vinyl ee nalka leh Nooca Cufnaanta （mm） Cabbirka Weyn (mcd / ㎡) Waqtiga xaddiga (min) 5 min 10min 60min PVC-150 0.35 90cm ama 100cm ballac 200 200 10 1200 PVC-200 0.35 400 190 25 2000 PVC-300 0.45 600 250 35 3500 Qeexitaannada gaarka ah waxaan diyaarin karnaa sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha. Tilmaamaha shaqooyinka: 1. Dabka sare u adkaysta adoo adeegsanaya sharooto luminescent oo ay ka sameysay viny ...
Faahfaahinta filimka vinyl naxaasta leh
Adag (mcd / ㎡) Waqtiga
90cm ama 100cm
Faahfaahinta qaaska ah waxaan u diyaarin karnaa sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
1. Dabka sare u adkaysi u leh isticmaalidda sharooto luminescent ka sameysan balaastig vinyl ah.
2. Awoodda sare ee cusbada u adkaysata iyo saabuun u adkaysta.
3. Awoodda sareysa ee iska caabbinta qabow / kuleylka.
4. Hawlaha farsamada sare ee cajaladda luminescent.
5. Awood adag oo dhejis dheellitiran oo loogu talagalay sharoobada luminescenterka.
6. Waxaa lagu dabaqi karaa silk-screen ama daabacaadda daabacan.
7. Guluubka loo yaqaan 'acrylic ale' alehesive 'waxay leeyihiin astaamaha awooda-cimilada sare.
Waxaad si fudud ugu dhejin kartaa cajaladda luminescenterka meel kasta oo aad rabto, sidoo kale waa loo goyn karaa shaxanka, shaxanka iyo qaab kasta, ama waxaa lagu daabacan karaa shaashad. Kaliya looma adeegsan karo qurxinta, meelaha dadweynaha (sida hoteelka, wadada, dhismaha iwm.), Laakiin sidoo kale alaabta isboortiga, wareejinta, telefoonka iyo qalabka korontada iwm.
Waxaa loo istcimaalaa saxeexa amniga iyo aqoonsiga jihada, Gaar ahaan waa mid ka mid ah agabyada ugu wanaagsan uguna habboon ee lagu baari karo calaamadda badbaadada naftaada.
Filimka 'photoluminescent' / cajaladdu waxay leeyihiin saameyn aad u wanaagsan oo ku kaydinta wax kastoo muuqda iyo iftiimaya. Kadib markay nuugaan iftiinka muuqda 10 ilaa 30 daqiiqo, waxay ku dhex nuuri karaan gudcurka muddo 12 saacadood ah ugu yaraan. Waana lagu soo celin karaa wakhti kasta oo kaydinta iyo socodka dhalaalaya. Iyagu waxay leeyihiin waxqabadka wanaagsan ee cimilada waarta oo aan sun lahayn iyo wax aan dhib lahayn oo aan lahayn shucaac. Filinka luminescent-ka leh ee is-dhejinta ayaa loo istcimaali karaa dusha sare qalab kala duwan ama maqaal, kaas oo isticmaalku la mid yahay kan adag, xitaa waxbadan ayaa ka sahlan. meesha aad ugu baahan tahay.
1. Gubashada dabka oo sarreeya iyadoo la adeegsanayo sharooto luminecenterka ah oo laga sameeyay caagagga PVC.
7. Xayraanta loo yaqaan 'acrylic ale' ayaa leh astaamaha ilaalinta heer sare.
Waxaad si fudud ugu dhejin kartaa cajaladda luminescenterka meel kasta oo aad rabto, sidoo kale waa loo goyn karaa shaxanka, shaxanka iyo qaab kasta, ama waxaa lagu daabacan karaa shaashad. Kaliya looma adeegsan karo qurxinta, meelaha dadweynaha (sida hudheelka, dariiqyada, dhismaha iwm), laakiin sidoo kale alaabada isboortiga, wareejinta, telefoonka iyo qalabka korantada iwm. Waxaa loo isticmaalaa saxeexa amaanka iyo aqoonsiga jihada Gaar ahaan, waa mid ka mid ah agabyada ugu wanaagsan uguna habboon ee lagu baari karo-lagu daabaco calaamadaha nabadgelyada naftaada.
1. Waxaa doorbidan in la dalbado dhismaha dusha siman oo heerkulkiisu yahay 10 ~ 40 ℃.
2. U yaree filimka cabbiro kaladuwan oo toos ayaa loogu dhajin karaa meelaha sida badalida isticmaalka qurxinta.
3. Jaantus / dabeecad dusha sare lagu daabacay
4. Nadiifi dusha sare nadiifinta ka hor intaadan dul dhigin. Looma oggola calaamad dufan ama boodh dul saaran.
5. Filimku wuu balaadhin karaa. Ka taxaddar inaadan ku tuurin dardaarankaaga kuna tali inaad cadaadiska ku hayso.
6. Ka saar warqadda gadaal oo si fiican u cadaadi dusha.
Hore: Ciddiyaha Wadada Subway
Xiga: Ku dhalaalaya mugdi guduud (Fiber) / Ku iftiimin xargaha tolida madow